फेरि होला लकडाउन ? यस्तो छ विज्ञको राय « Postpati – News For All
चैत ११, काठमाडौँ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरिएको १ वर्ष पूरा भएको छ ।
सरकारले ठीक १ वर्षअघि चैत ११ गतेदेखि १ साताका लागि लकडाउन गरेको थियो । तर त्यसको अवधि थपिँदै लगिएको थियो । छिमेकी मुलुक भारतमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेसँगै नेपालमा त्रास बढेको छ । धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘नेपालमा के होला ?’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी गत वर्षझैं लकडाउन घोषणा गर्नु त्रुटिपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘कार्यालय, विद्यालय, कलकारखाना र सार्वजनिक सवारी साधनलाई सिफ्टअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ निर्देशक डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘सबै नागरिकले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने हुँदा देशभर भीडभाड हुने कार्य नगर्न/नगराउन अनुरोध गरिएको डा. गौतम बताउँछन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।